जापानले फेरि माग्यो सयौँ संख्यामा नेपाली कामदार, आवेदन क–कस्ले दिने दिन पाउने ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > प्रवास > जापानले फेरि माग्यो सयौँ संख्यामा नेपाली कामदार, आवेदन क–कस्ले दिने दिन पाउने ?
जापानले फेरि माग्यो सयौँ संख्यामा नेपाली कामदार, आवेदन क–कस्ले दिने दिन पाउने ?
काठमाण्डौं । नर्सिङ केयर गिभरका लागि जापानले फेरि नेपालमा भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसअघि एक चरणमा परीक्षा सञ्चालन गरिसकेको जापानले जनवरी र मार्चमा गरी दुई चरणमा केयर गिभरका लागि भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
जनवरीमा १ हजार र मार्चमा १ हजार ३ सय जनाले परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछन् । जापान फाउन्डेसनले परीक्षामा सहभागी हुन चाहनासँग आवेदन माग गरेको छ । जनवरी ७, ८, १४, १५, १६, २१, २२, २३, २८ र २९ तारिखमा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । मार्चमा ३, ४, ५, ९, १०, ११, १२, १५, १६, १७, १८ र १९ तारिखमा पनि परीक्षाको मिति तोकिएको छ ।
जापानले यसअघि कात्तिक सञ्चालन गरेको भाषा परीक्षामा ५६ जना नेपाली उत्तीर्ण भएका थिए । तर उनीहरु मध्ये कतिले सीप परीक्षा पास गरे भन्ने जानकारी दिइएको छैन ।
यो पटक पनि परीक्षा शुल्क २ हजार ५ सय तोकिएको छ । परीक्षा कम्प्युटरमा आधारित हुनेछ । युनिभर्सल ल्याग्वेज एन्ड कम्प्युटर इन्ष्टिच्युट डिल्लीबजारमा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ ।
स्क्रिप्ट, भुक्याबलरी, कन्भेक्सनल एन्ड एक्स्प्रेसन, राइटिङ टाइप र कम्प्युटरमा टाइपिङ स्किलमा आधारित भएर परीक्षा हुनेछ । २५० पूणरङ्कको परीक्षामा २ सय अंक आएर उत्तीर्ण गराइने सूचनामा उल्लेख छ ।
परीक्षामा आवेदन दिन नेपाली नागरिकता, राहदानी वा सवारी चालक अनुमतिपत्र आवश्यक पर्नेछ । परीक्षामा सहभागी हुन जापानी भाषामा ए टू लेभल आवश्यक पर्नेछ । दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने कामका लागि सहजै भाषा बुझ्ने र बोल्ने क्षमता पनि न्युनतम् योग्यताका रुपमा छ ।
२०७६ पौष २० गते १३:४३ मा प्रकाशित
लोकसेवा आयोगले भर्खरै निकाल्यो यस्तो जरुरी सूचना
यो सेयर किनेमा १०% बोनस र बोनसपछि ५०% हकप्रद सुरक्षित हुने,आजै किन्नुहोस् !
तपाईलाई पर्यो त ? गोलाप्रथाबाट बाँडफाँट भयो बैंकको एफपीओ !
पर्यटन मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७३ करोडको बजेट सिलिङ दिइयो